Polyurethane ntekwasa faiba glaasi Fabric Manufacturers & Suppliers - China Polyurethane ntekwasa faiba glaasi Fabric Factory
Pu Polyester Fabric bụ faiba glaasi ákwà ntekwasa na Polyurethane, na ọtụtụ ihe mejupụtara na otutu ọrụ, imewe nke Pu ntekwasa faiba glaasi ákwà nwere ike imeghari dị iche iche places.It atụmatụ ọma rebound resilience, ike, softness, na-enwu gbaa na agba, elu-eguzogide-eyi, oyi, mmanụ, mmiri, ịka nká na ihu igwe. O nwekwara ọrụ nke nje na - egbochi mgbochi, enwere ike iji ya maka njigide ebu, ikpo ọkụ na mgbochi ultraviolet.
Pu ntekwasa faiba glaasi Fabric Cloth
Pu ntekwasa faiba glaasi Fabric Cloth bụ a fireproof ákwà mere site mkpuchi ire ọkụ retardant polyurethane n'elu faiba glaasi ákwà na ọkọ mkpuchi technology. Ọ nwere ngwa dịgasị iche iche na atụmatụ nke nguzogide okpomọkụ dị elu, mkpuchi, ọkụ ọkụ, akara mmiri na akara ikuku.
Pu ntekwasa faiba glaasi Cloth
Pu ntekwasa faiba glaasi Cloth bụ a fireproof ákwà mere site mkpuchi ire ọkụ retardant polyurethane n'elu faiba glaasi ákwà na ọkọ mkpuchi technology. Ọ nwere ngwa dịgasị iche iche na atụmatụ nke nguzogide okpomọkụ dị elu, mkpuchi, ọkụ ọkụ, akara mmiri na akara ikuku.
Anti corrosion faiba glaasi Cloth
Anti corrosion faiba glaasi Cloth bụ a fireproof ákwà mere site mkpuchi ire ọkụ retardant polyurethane n'elu faiba glaasi ákwà na ọkọ mkpuchi technology. Ọ nwere ngwa dịgasị iche iche na atụmatụ nke nguzogide okpomọkụ dị elu, mkpuchi, ọkụ ọkụ, akara mmiri na akara ikuku.
Okpomọkụ mesoo Bulky faiba glaasi Cloth
Okpomọkụ mesoo Bulky faiba glaasi Cloth bụ a fireproof ákwà mere site mkpuchi ire ọkụ retardant polyurethane n'elu faiba glaasi ákwà na ọkọ mkpuchi technology. Ọ nwere ngwa dịgasị iche iche na atụmatụ nke nguzogide okpomọkụ dị elu, mkpuchi, ọkụ ọkụ, akara mmiri na akara ikuku.
3m Fiber Uwe
3m Fiber Cloth bụ a fireproof ákwà mere site mkpuchi ire ọkụ retardant polyurethane n'elu faiba glaasi ákwà na ọkọ mkpuchi technology. Ọ nwere ngwa dịgasị iche iche na atụmatụ nke nguzogide okpomọkụ dị elu, mkpuchi, ọkụ ọkụ, akara mmiri na akara ikuku.
Ike faiba glaasi Cloth
Pu Ike Faiba glaasi Cloth na-wuru si faiba glaasi isi ákwà na impregnated ma ọ bụ ntekwasa otu akụkụ ma ọ bụ abụọ na a akpan mejupụtara silicone roba. N'ihi silicone roba physiological inert, ọ bụghị nanị na-amụba ike, thermal mkpuchi, fireproof, egbochi ihe Njirimara, ma na-nwere ozone-eguzogide, oxygen ịka nká, ìhè ịka nká, ihu igwe ịka nká, mmanụ na-eguzogide na ndị ọzọ Njirimara.
Pu ntekwasa polyester Fabric
Pu ntekwasa faiba glaasi Fabric Cloth bụ elu arụmọrụ faiba glaasi ákwà ntekwasa na pụrụ iche elu-tech Polyurethane polima .Such imecha ákwà nwere ike idi okpomọkụ ruo 180 ℃ maka obere bursts. Ọ nwere nguzogide abrasion dị mma na iguzogide mmanụ na solvents.One kwadoro / abụọ n'akụkụ polyurethane ntekwasa faiba glaasi na ọtụtụ agba na widths dị.
Pu faiba glaasi Cloth
faiba glaasi ntekwasa Pu ákwà bụ a fireproof ákwà mere site mkpuchi ire ọkụ retardant polyurethane n'elu faiba glaasi ákwà na ọkọ mkpuchi technology. Ọ nwere ngwa dịgasị iche iche na atụmatụ nke nguzogide okpomọkụ dị elu, mkpuchi, ọkụ ọkụ, akara mmiri na akara ikuku.
Uwe faiba glaasi, Acryli ntekwasa faiba glaasi, Acryli ntekwasa faiba glaasi Fabric, Aluminized faiba glaasi Cloth, Pu ntekwasa faiba glaasi Fabric Cloth, Acryli faiba glaasi Cloth,